Filoham-pirenena belarosiana hanatsorana ny fanamorana ny visa ho an'ny olom-pirenena belarosiana
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Filoham-pirenena belarosiana hanatsorana ny fanamorana ny visa ho an'ny olom-pirenena belarosiana
Filohan'ny Belarus Alexander Lukashenko
Filoha Belarosia Alexander Lukashenko dia mikasa ny hanao sonia fifanarahana amin'ny vondrona Eraopeanina amin'ny fanamorana ny visa. Ny fisoratana anarana visa Schengen dia ho mora kokoa ho an'ireo belarosiana manomboka amin'ny 60 ka hatramin'ny 35 euro. Io no nambaran'ny solontenan'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Belarosiana Anatoly Glaz.
Raha ny filazany dia tsy mora tamin'i Alexander Lukashenko io fanapahan-kevitra io. Saingy, ny mpitarika belarosiana dia mihevitra ny filàna fitomboan'ny fivezivezena amin'ny olom-pirenena. Nilaza ihany koa ny solontenan'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny fa ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana dia nialohavan'ireo fifampiraharahana lava nifanaovana tamin'ireo mpiara-miasa eropeana.
Tanora Karaiba hiatrika olana momba ny dia lavitra sy asa amin'ny ho avy amin'ny hetsika rezionaly CTO